Ravintsara - Wikipedia
Ravina sy voan' ny ravintsara
Ny ravintsara dia hazo maitso ravina sy tsy mihintsan-dravina mandavan-taona, mahatratra halava anelanelan' ny 15 sy 25 m, mafy ravina, izay ahazoana menaka fanao fanafody ny fitanehana sy ny fitsihana azy. Amin' ny ankapobeny dia miendrika atody ny raviny izay mirefy 10 sm eo ho eo, izy mamoaka fofona mahery raha hosena amin' ny tanana na amin-javatra hafa. Be nofony ny voany izay boribory miloko manga matroka na mainty rehefa masaka. Ny ravintsara dia zavamaniry avy any Sina sy Taioana ary Japàna nefa afaka maniry amin' ny faritra samihafa amin' ny kôntinenta hafa. Ny anarana ara-tsiansan' ny ravintsara dia Cinnamomum camphoraio.
Raviny sy voany
Volena ho haingon-tanàna ny ravintsara noho ny raviny maitso lalandava, volena milahatra eny an-tsisin' arabe na eny afovoany any amin' ny tany manana toetany mafana.
Ny menaka azo avy amin' ny ravin' ny ravintsara volena aty Madgasikara, izay atao hope "ravintsara" ihany, dia heverina ho fanafody mamono vitosy sy mampifoha ny hery fiarovana ary fitsaboana amin' ny tsy fahazoana torimason ny harerahana, ny tsy fahazotoa-misakafo, ny tsy fifantohana, ny fahamorà-malahelo, sns. Itsaboana ny aretin' ny fisefoana sy ny aretin' ny hoditra vokatry ny virosy.
Hazo ravintsaraao Tampon (nosy any La Réunion).
Ny vatan' ny ravintsara, izay manana fofona maharitra mandavan-taona, dia halan' ny bibikely, isan' izany ny lolo mpanimba lamba. Izany no antony andrafetana ny vata hitondrana lasoà na volom-biby hatao fitafiana amin' ny hazon' ny ravintsara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ravintsara&oldid=1000549"
Voaova farany tamin'ny 21 Janoary 2021 amin'ny 09:21 ity pejy ity.